Shenzhen KingTop Technology Co., Ltd.dia naorina tamin'ny 2004, toerana any Shenzhen izay manana tombony miavaka amin'ny rojo indostrialy feno sy fitaterana mety. KingTop dia iray amin'ireo orinasa matihanina PCB & PCBA any Chine. Manome serivisy fizaran-tany sy serivisy fampandrosoana ho an'ny mpanjifa. Ary manana ekipa R&D, andalana fivoriambe hamolavola sy hamokatra vokatra elektronika isan-karazany hoentina.
KingTop dia manana atrikasa tsy misy vovoka 3500 metatra toradroa, mpiasa maherin'ny 120, teknisianina 10, injeniera 8. Fitaovana fampitaovana lalindalina kokoa, toy ny YAMAHA YS24, YSM10, YS12, YG200, YV100XGP, 4sets AOI (AOI amin'ny Internet), milina fanaraha-maso X-RAY Welding Spot Inspection (BGA, PoP, CSP, QFN, Flip Chip, COB), 3D SPI (automatique haavo haingam-pandeha 3D haingam-pandeha fanaraha-maso), Reflow Oven ary Wave Soldering Machine (mihoatra ny 6sets tsipika SMT mandeha ho azy), ary ny tsipika famokarana THT. Ny fampandehanana orinasa dia mifanaraka amin'ny rafitra ISO9001.
Mamatsy PoP (fonosana amin'ny fonosana) Takian'ny fanodinana fametahana avo lenta IC. Azontsika atao ny mamory ny 0201 / 01005chip sy QFP / BGA / QFN miloko 0.2mm. Omeo kely ny sola HDI amin'ny alàlan'ny habe 0.1mm, ny trace ambany indrindra 0.075mm, ny habaka ambany indrindra 0.075mm, ny fandevenan'ny jamba. Ny milina famandrana reflekto amin'ny faritra 10 mari-pana mba hanatsarana ny fahitsiana sy ny kalitao.
PCB isan-karazany, PCBA an'ny indostrialy tafiditra ao anaty PC, mainboard Computer, PC table, Solar Energy, AI, UAV, Robotic, Display, elektronika niomerika, fitaovana mozika matihanina, POS, Security, Smart electronics, Smart Home, EV charger, GPS, IoT, Fanaraha-maso ny hafanana ara-indostrialy, sns.